काठमाडौं । सेक्युरिटी भेन्डर र साइबर अपराधीको लडाई जारी छ । सेक्युरिटी भेन्डरहरु त्यस्ता अपराधिक गतिविधिलाई रोक्न नयाँ नयाँ प्रविधि ल्याउँछन् । उता साइबर अपराधी त्यो सुरक्षाको जालो तोड्न नयाँ तरिका पत्ता लगाउँछन् । यसकारण अब कस्तो सेक्युरिटी सोलुसन्सले साइबर आक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन् त भन्ने प्रश्न आइरहेको छ । बारम्बार अपडेट हुने र नयाँ फिचरसहित आउने सेक्युरिटी सोलुसन्सले मात्रै तपाईंलाई सुरक्षाको अनूभुति दिन सक्छन् ।
क्यासपरस्की सोलुसन्स एक उत्तम अवसर बन्न सकिरहेको छ, जसले हरेक दिन ३,४६,००० नया मालिसियसहरुलाई डिटेक्ट गरिरहेको छ । यसका प्रडक्ट ७२६ मिलियन प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरिरहेका छन् । क्यासपरस्कीको सबल पक्ष नै यही हो कि यो निरन्तर अपडेट भइरहेको छ । नयाँ नयाँ सेक्युरिटी रिस्कहरुलाई कम गर्ने गरी फिचरहरु अपग्रेड गरिरहेको छ । यही सेरोफेरोमा क्यासपरस्की २०२० भर्जन नयाँ अपडेटहरु सहित आउने तयारीमा छ ।
नेपालमा सागर ग्रुपले सन् २००८ देखि क्यासपरस्काईका प्रडक्टहरु वि क्री वितरण गर्दै आएको छ । हालै एक कार्यक्रम गरी सागर ग्रुपले क्यासपरस्कीको फस्ट लुकको बारेमा जानकारी दियो ।
ग्राहकका लागि मुख्य प्रडक्टहरुमा क्यासपरस्की एन्टिभाइरस, क्यासपरस्की इन्टरनेट सेक्युरिटी (विन्डोज, एन्ड्रोइड र म्याकका लागि), क्यासपरस्की इन्टरनेट सेक्युरिटी एन्ड्रोइड, क्यास्परस्की टोटल सेक्युरिटी र क्यास्परस्की सेक्युरिटी क्लाउड रहेका छन् । यी सबै प्रडक्टका २०२० भर्सनहरुमा नयाँ फिचर र अपडेटहरु राखिएको छ, जसले सुरक्षित डिजिटल विश्व बनाउन सहयोग गर्नेछन् ।
विभिन्न किसिमका थ्रेटहरु आइरहेका छन्, जसका लागि विशेष तरिकाले बनाइएको प्रडक्ट चाहिन्छ । कास्परस्कीले यस पटक नेटवर्क एक्प्लोइट विरुद्धको सुरक्षा ल्याएको छ । नेटवर्कमा खतरानाक भाइरसहरुको आक्रमणलाई यसले रोक्ने छ ।
यसले RATs अर्थात् रिमोट एक्सेस टुल्स ल्याएको छ, जसबाट ग्राहकले रिमोटको सहायतले साइबर अपराधीले आक्रमणको प्रयास गर्ने बित्तिकै आफ्नो सिस्टम प्रोटेक्ट गर्न सक्छन् । यो सर्भिस क्यास्परस्की २०२० मा डिफल्ट रहने छ ।
साइबर अपराधीले सिस्टममा आक्रमण गर्ने सामान्य तरिकाको कुरा गर्दा विभिन्न प्रोग्रामहरु (जस्तै माइक्रोसफ्ट अफिस) आदिमा धेरै भल्नेरिाबिलिटीहरु रहन्छन् । नयाँ संस्करणको कास्परस्कीमा यससम्बन्धी प्रोटेक्सनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
अहिले क्लाउड स्टोरेजको बढ्दो प्रयोग छ । यसर्थ क्लाउड प्रोटेक्सनबारे पनि सोच्नपर्ने बेला आएको छ । क्यासपरस्कीले वानड्राइभका लागि मालवेयर स्क्यान गर्न सुरु गरिसकेको छ ।
क्यासपरस्की प्रडक्ट र यसको सर्भिर(नेटवर्क, लाइसेन्सिङ वा अपडेट सर्भर) बीचको सबै कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड भएका छन् ।
अन्ततः क्यासपरस्की २०२० ले टु फ्याक्टर अथेन्टिकेशन थपेकोृ छ ।
म्याक युजरका लागि डार्क थिम थपिएको छ । सेफ मनी फिचरहरुमा नयाँ अपडेटहरु थपिएको छ भने प्रयोगकर्ताले अब अटोमेटिक रुपमा मालवेयरका लागि एक्स्टर्नल स्टोरेज डिभाइसहरु स्क्यान गर्न सक्छन् ।
एन्ड्रोइडका लागि क्यासपरस्की सेक्युरिटी क्लाउड प्रडक्टमा नयाँ फिचर परमिसन चेकर राखिएको छ । यसले इन्स्टल भएका एपहरुमा काम गर्दछ र गलत स्रोतबाट आउने एपहरुलाई बन्द गर्न सहयोग गर्छ ।
Security: Defends against viruses, ransomware (crypto lockers) and other threats
Performance: Protects without slowing you down
Simplicity: Simplifies security easy to set up and use
Privacy: Stops spies hijacking your webcam and hides your browsing activity plus blocks phishing scams.
Safe Money: Launches and encrypted browser to protect your online payments with bank-grade encryption on PC and Mac
PC, Mac, and Mobile: Secures whatever devices you use in any combination
Safe Kids: Includesacorrupt content blocker, GPS tracker and ore to help protect your kids using advanced parental control
Password Manager: Manages and securely stores all your passwords, images of personal documents and syncs them for easy access from PC, Mac, and mobile using secure digital vault withasingle master password. File Protection: Backs up your precious photos, music, and files on PC